IRantshi yaseYosemite Deer Valley (D)
I-Yosemite Deer Valley Ranch ikwintlambo entle, enoxolo ejikelezwe yipine kunye nemithi ye-oki. Iintaba, amachibi, iishedi ezindala kunye nobomi obuninzi basendle benza ukuba kube mnandi kwaye kuhlale kunomdla kwifama yethu yeehektare ezingama-360. Ifama ikwiikhilomitha ezingama-26 kuphela ukusuka eYosemite National Park kwaye ikufutshane noluntu lwaseGreeley Hill. Ifenitshala yelog, imizobo yasentshona kunye nezilwanyana zasendle zibonakaliswe kwikhaya lethu. Ngesaziso esiphezulu, indawo yeepeni zehashe ekhoyo.
Ukuba imihla ekule khalenda ayisebenzi kuwe, unokujonga ikhalenda yeYosemite Deer Valley Ranch (C). Amaxabiso ayafana kwaye indlu ingaphaya kwedlelo ukusuka kweli khaya. Ikwamiselwe abantu aba-4 kunye ne-decore efanayo.
Indawo yokuqeshisa iholide yaseYosemite Deer Valley ikwifama yeenkomo esebenzayo kunye neeNtaba zeSierra Nevada. Ujikelezwe yipropathi yabucala kunye neForest yeSizwe.
Mna nomyeni wam sihlala kwincopho yentaba ephezu kwefama. Ukuba ufuna uncedo okanye unemibuzo nceda usitsalele umnxeba. Ndiyazama ukudlula ndidibane nalo lonke undwendwe lwethu kwaye ndiqinisekise ukuba bonwabile.
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Coulterville